July 2010 - Knowledge is Free
If your household harbors more than one computer, you ve probably wondered about home networking. Maybe you ve gone so far as to start setting upanetwork and given up in frustration. Well, now you can relax. Home Networking All-In-One Desk Reference For Dummies has come to the rescue!
A network will make your life easier, and Home Networking All-In-One Desk Reference For Dummies makes it easier to create one. It shows you how to choose the right hardware, add user accounts, get different operating systems to work together, secure your network, exchange files, add wireless devices, and even use Wi-Fi out in public. Seven individual, self-contained minibooks cover:...
Publisher: For Dummies | ISBN: 0470275197 | edition 2008 | PDF | 720 pages | 10.9 mb
Post by Reco76
Posted by kmo at 11:20 AM No comments:
ကွန်ပျူတာအတွင်း malware များ ကပ်ညှိခြင်းကြောင့် Folder Option အောက်က Show Hidden Files and Folders ကို ဖွင့်ရန်ရွေးချယ်ပေးလိုက်စဉ် ပြောင်းလဲမှု မရှိဘဲ သူ့နဂိုမူလ setting အတိုင်း Do not show hidden files and folders ကိုသာ ပြန်လည်ရောက်ရှိနေကြောင်း တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းသို့ malware များရဲ့ နှောင့်ယှက် ဟန့်တားခြင်းကြောင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမှန်သမျှကို တားဆီးပိတ်ပင်နေမှုကို ပြန်လည်ကုစား ပေးရန်အတွက် registry အတွင်း ၀င်ရောက်ကိုင်တွယ်ခြင်းဖြင့် ပြင်ဆင်ကြည့်နိုင်ပါသည်။
(၁) Start မှတဆင့် Run ကိုရွေးချယ်ပြီး regedit လို့ ရိုက်ထည့်လိုက်ပြီး Registry Editor ကို ဖွင့်ပါမယ်။
(၂) Registry Editor အတွင်း အောက်ပါအတိုင်း အဆင့်ဆင့် ၀င်ရောက် ရွေးချယ်သွားလိုက်ပါ။
HKEY_LOCAL_MACHINE\_SOFTWARE\_Microsoft\_Windows\_CurrentVersion\_Explorer\_ Advanced\_ Folder\_Hidden\_SHOWALL
(၃) SHOWALL အထိ ရွေးချယ်ထားလိုက်စဉ် ညာဖက်အကွက်အတွင်းမှ CheckedValue ဆိုသည့် စာကြောင်း ကို delete လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
(၄) ပြီးတော့ DWORD Value တစ်ခုကို ပြန်လည် တည်ဆောက်ပေးရပါမယ်။ ဒါကြောင့် ယခင် delete လုပ်ခဲ့တဲ့ အကွက်အတွင်းမှာပဲ Right Click တစ်ချက်နှိပ်၊ New > DWORD Value ကို ရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါမယ်။
(၅) CheckedValue ဟု ရိုက်ထည့်လိုက်ပြီး၊ CheckedValue ပေါ်တွင် Double Click နှိပ်၍ Value Data တွင် 1 ဟု ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ရုံသာ ဖြစ်သည်။ ဒါဆိုရင် My Computer ရဲ့ Tools>Folder Options...အတွင်းက Show hidden files and folders ကို ရွေးချယ်လို့ ရသွားပြီပေါ့။
Posted by kmo at 10:52 AM No comments: